FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA CHIZER - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika Chizer
Alika mitambatra Chihuahua / Miniature Schnauzer mifangaro
Kiki the Chihuahua / Schnauzer mifangaro amin'ny taona 1 sy sasany— Hitanay tao amin'ny tsena parasy i Kiki, ary noheverinay fa hybrid tena hafakely nefa mahafatifaty izy. Tonga dia raiki-pitia taminy izahay. Enina herinandro teo ho eo izy vao nahazo azy. Nanana marika toy ny a Rottweiler . Farany rehefa nitombo ny volony dia nihalava sy nivadika Schnauzer volondavenona Efa ho 2 taona izy ary tsy azontsika an-tsaina ny fiainana raha tsy eo izy! Izy no manana ny toetra kely tsara indrindra. Samy mizara toetra Chihuahua sy Schnauzer izy. Miaro toy ny a Chihuahua , ary manana ny hodi-kazo Schnauzer ary ANGOVO . Hainy ny mipetraka, mijanona, miteny, mandry, 'mandehana mahazo bubba' (izy Pug rahalahy), ankoatry ny baiko hafa. Tsy nahafantatra velively fa hybrid malaza ity ary heverina ho 'Chizers' izy ireo! Tena mila iray hafa izahay! '
Ny alika dia tsy alika madio. Lakroa misy eo anelanelan'ny Chihuahua ary ny Miniature Schnauzer . Ny fomba tsara indrindra hamaritana ny toetran'ny karazany mifangaro dia ny mijery ireo karazana rehetra ao amin'ny hazo fijaliana ary fantaro fa afaka mahazo mitambatra amin'ny iray amin'ireo toetra hita ao amin'ny karazany roa ianao. Tsy ireo alika hybrid mpamorona rehetra ireo no noompiana fa 50% purebred ka hatramin'ny 50% purebred. Tena mahazatra ny mpiompy ny miompy lakroa misy taranaka maro .
Drafitra mpamorona endrika = Schnauchi
Mpanoratra International Canine Registry®= Chizer
Mocha the Chizer (alika mifangaro Chihuahua / Miniature Schnauzer mifangaro) amin'ny 1 taona sy tapany
Mocha the Chizer (karazana mix mix Chihuahua / Miniature Schnauzer) ho alika kely amin'ny 4 volana
Coco the Chizer (alika mitambatra Chihuahua / Miniature Schnauzer) amin'ny 2 taona— 'Coco dia alika mpankato sy malefaka. Tiany ny mijery tele ary milalao miaraka amin'ny ankizy manodidina ny trano. Mijanona eo anilako izy isaky ny mandry aho ary indrindra rehefa marary aho. Tian'i Coco ny maka sy manenjika squirrels. Ny tongony fohy dia mitondra azy lavitra, mino izany na tsia. '
'Ity no Honey the Chizer amin'ny herintaona. Miniature Schnauzer sy Chihuahua izy. Ny tantely dia somary lehibe kokoa noho ny Chihuahua ary manana volo antonony lava maditra. Tena be fitiavana i Honey ary hikoropaka mandritra ny ora maro raha avelanao izy. Tiany ny manenjika ny saka ahy ary manantena izy ireo fa hanenjika ny lamosiny ... ny iray hanao dia tiany izy! Ny tantely dia tsara manodidina ny ankizy ary misolelaka aminy foana. Tiany ny milalao tratra aho raha vitanao! Haingam-pandeha izy. Ny tantely dia miaro ary tsy matoky olon-tsy fantatra . Mila fotoana hifankazarana amin'ny olona vaovao izy nefa. Hendry izy ary hipetraka, hijanona, hiteny, ho avy mandry. Tsy azoko an-tsaina ny fiainana raha tsy misy ny malalako! '
'Ity no Chizer Slicky-ko 3 volana. Tena sariaka izy ary tia milalao saka . '
'Ity no Pennelope, Chihuahua / Miniature Schnauzer zanako 2 taona mifangaro amin'ny volony lava. Izy no, alika lavitra, ny fitondran-tena farany hitako. Ny lalao tiany indrindra dia ny fakana ary tena tiany daholo ny cheesy, indrindra ny «crackers»! Na izany aza, alika kely saro-piaro i Pennelope kely. Raha mahita alika hafa eo akaikiko izy, dia tezitra avy hatrany, nefa tsy ratsy fanahy mihitsy. '
shih tzu pekingese afangaro hypoallergenic
Pennelope, Chihuahua / Miniature Schnauzer, 2 taona, mifangaro amin'ny volony, voaharatra fohy nitafy azy harness mavokely mafana .
'Ity no Chizer' Lucy 'antsika. 6 taona izy amin'ity sary ity ary sariaka be. Hitsidika miaraka aminy izy vahiny mandritra ny mandeha isan'andro ary mahazo namana haingana be. Tena mandanjalanja izy ary tena faly. '
Lucy the Chizer amin'ny faha-6 taonany
Jereo ohatra misimisy kokoa momba ilay Chizer
Sary Chizer 1
tongony alika tongotra ambadika
pitbull misy tadiny fotsy sy mainty
manaikitra manaikitra amin'ny saka ny rakikira